MYANMAR – democracy for burma
On November 26, 2016 November 27, 2016 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, PROTEST, State Counsellor Office Information Committee, UNHCRLeaveacomment
Myanmar protest against unhcr for the comments made byastaff of unhcr
Nay Pyi Taw, 26 November 2016
Myanmar Permanent Representative of the office of the United Nations and other international organizations in Geneva, U Htin Linn called the Deputy High Commissioner of unhcr and filedaprotest againstamember of the staff of unhcr, John Mckissick, based in cox bazar in Bangladesh , against the government of Myanmar in an interview with the BBC that appeared in the news on 24 November. The action not only violates the code of conduct of the united nations staff, but she has also undermined the trust and cooperation granted at unhcr by Myanmar.
Under the leadership of the ministry of foreign affairs, the permanent representative of Myanmar U Htin Linn met without delay the Deputy High Commissioner for the protection of unhcr m. Volker Turk on 25 November, because the high commissioner and Deputy High Commissioner of unhcr were not available.
At the meeting, the permanent representative of Myanmar asked the unhcr to confirm officially if unhcr had actually made the allegations against the government of Myanmar. If such allegations were not made by unhcr, the permanent representative has then asked the unhcr toapress statement explainingareal situation. If such allegations were actually made by unhcr so, Myanmar depositsastrong objection against unhcr for allegations wrongdoers do without prove that the government of Myanmar has evidence, which is equivalent toaviolation of the code of conduct of the united nations . The Permanent Representative also explained that the accusations were not onlyadetrimental effect on the government of Myanmar, but also corroded the integrity of the unhcr asaunited nations agency just, not politicized, neutral and impartial, helping the refugees from all over the world . If necessary, Myanmar would also have an official objection in writing.
The Deputy High Commissioner to the protection of unhcr replied that he was also surprised by the statement of John Mckissick. This was not the official position of unhcr. He did not represent unhcr and was comprised exclusively by John Mckissick. However, unhcr will consider the question and give an appropriate response to the request of the permanent representative of Myanmar. Unhcr will continue to cooperate with the people of Myanmar and stands ready to provide all the necessary assistance.
Myanmar is of the opinion that being one of the agencies of the United Nations, unhcr staff has the duty to behave with the highest level of integrity and morality as well asacode of conduct of the united nations at the time in and out The Champs. Libels and make irresponsible statements and allegations under the pretext of the united nations or deliberately give the misleading impression as the official positions of the United Nations / statements to the media of information is neither justified nor acceptable fromastaff of the united nations . Unhcr has the responsibility to account for the action of m. John mckissick aimed at deliberately wrong inform the public and to denature the integrity of the government of Myanmar.
(Committee of information of the office of the state councillor) Continue reading “MYANMAR PROTESTS UNHCR-John McKissick” →
On December 25, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, ThailandLeaveacomment
Khin Hlaing canceled concert tour Thailand
နားလည်နိုင်ကြပါစေ crKhin Hlaing
On December 24, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, JAPAN, MYANMAR, ThailandLeaveacomment
မနက်ဖြန်ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများခင်ဗျာ။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ *ထိုင်းသံရုံးရှေ့* ဆန္ဒပြပွဲ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ပြည်သူကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ရကောင်းမှန်း မသိတဲ့အစိုးရကြောင့် လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာ အပြစ်မရှိတဲ့ လူငယ်နှစ်ဦး ထိုင်းအစိုးရက ဒီနေ့မနက် သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ကြပြီ…
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ပြည်ထောင်စုဖွာူမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားများအားလုံး မတရားခံရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်အတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနိူးဆော်အပ်ပါသည်။
နေ့ရက် ။ ၂၅ – ၁၂ – ၂၀၁၅ သောကြာနေ့
အချိန် ။ ညနေ ( ၃:၀၀ ~ ၄:၀၀ ) နာရီထိ
Royal Thai Embassy 在東京タイ王国大使館
Tokyo JAPAN 141-0021.
TEL:03-5789-2433 | FAX:03-5789-2428
“81” Country Code for Japan
On December 24, 2015 December 24, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, ThailandLeaveacomment
မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုဝင်းဇော်ထွန်းနှင့် ကိုဇော်လင်းတို့အတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
(၁) ရှေ့နေလိုက်ပေးသော ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ရှေ့နေများကောင်စီမှ ဤအမှုအတွက် ရှေ့နေ ၂၁ ဦးပါ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ ယင်း ၂၁ ဦးကော်မတီမှ လာမည့် ၁၁ ရက်နေ့တွင် အစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၂) ကြားကာလတွင် ရှေ့နေများကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သံရုံး၊ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ CSO များနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၃) ယနေ့ ချမှတ်ခဲ့သော စီရင်ချက်အတွက် High Court သို့ ဆက်လက်၍ အယူခံ တင်ပြပါမည်။ အယူခံ လက်ခံလျှင် ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးနိုင်မည် ဟု မျှော်မှန်းထားပါသည်။(အယူခံတင်ရန် အချိန် ၁ လ ပေးအပ်ထားကြောင်း သိရပါသည်။ ၁ ပတ်အတွင်းမဟုတ်ဘဲ ၁လ အတွင်း အယူခံတင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။)
(၄) ထို့နောက် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တရားလွှတ်တော်သို့ ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးရေးအတွက် ဆက်လက်၍ အယူခံဝင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပါမည်။ အဆိုပါအယူခံတွင် ပြစ်ဒဏ်များ ဆက်လက်၍ လျှော့ပေါ့ပေးနိုင်မည် ဟု မျှော်မှန်းထားပါသည်။
(၅) ၄င်းနောက် လိုအပ်လျှင် ထိုင်းဘုရင့်ကောင်စီသို့ ဆက်လက်၍ တင်ပြကာ ပြစ်ဒဏ်သက်သာခွင့် အယူခံတင်ပြခြင်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ဤသို့ တင်ပြရာတွင် ပြစ်ဒဏ်များ ဆက်လက် လျှော့ပေါ့ပေးနိုင်မည် ဟု မျှော်မှန်းထားပါသည်။
တင်ပြပါ အဆင့်များမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေကြောင်းအရ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးတို့အနေဖြင့် ဤအမှုတွင် စတင် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံရပြီးနောက်ပိုင်း ဥပဒေပညာရှင်များ၊ ကိုကျော်သောင်း၊ ကိုအောင်မျိုးသန့်၊ ကိုထူးချစ် တို့ကဲ့သို့သော CSO များနှင့် အနီးကပ် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေးများ၊ ဥပဒေအကာအကွယ်များ၊ တရားရုံးအခွင့်အရေးများ ရရှိစေရန် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့အနေဖြင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံသည့်အခါတိုင်း ဤအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဥပဒေကြောင်းအရ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပြောကြားမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အလားတူ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌအနေဖြင့်လည်း ထိုင်းလွှတ်တော်သို့ မေတ္တာရပ်ခံလွှာ ပေးပို့ခဲ့သလို အာမခံရရှိစေရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှု၊ လွတ်လပ်သော တရားစီရင်မှု၊ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများ၏ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ သံခင်းတမန်ခင်းအရလည်း ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်သမျှ၊ လုပ်လို့ရသမျှ ဆက်လက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
H.E. Thura U Shwe Mann
TRAVEL WARNING ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းသံရုံးကနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေအနေနဲ့ သတိထားပြီး သွားလာကြဖို့ ထိုင်းဘာသာနဲ့ သတိပေးကြေငြာချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်
ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်းအမှုတွင် မတရားစွပ်စွဲ သေဒဏ်အပေးခံရသော…ဇော်လင်းနှင့် ဝင်းဇော်ထွန်းတို့ အမှန်အတိုင်း ဖြစ်စေရေး….အတွက် မေတ္တာပို့သ ဆုတောင်းကိုမှု ရခိုင်ပြည်နယ်၊သံတွဲခရိုင်၊ဂျိတ္တောရပ်ကွက်ရှိ…အောင်သရဖူ စေတီတော်တွင် သာသနာပြု စွမ်းရည်မြှင့် သင်တန်းမှ သင်တန်းသား ဆရာတော်များနှင့် သင်တန်းသူ/သားများမှ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅….ညနေ ၅ နာရီတွင် တောင်ဆုမေတ္တာပို့သ ခဲ့သည်…
သခင် ခက်ထန် CR
Kyaw Nanda Ko
On December 24, 2015 December 25, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, ThailandLeaveacomment
For security reasons transfer date of Zaw Lin/Wai Phyo from Samui prison to high security Nakhon Si Thammarat Prison will be kept secret.
TOKYO JAPAN TAI EMBASSY
campaign shirts in progress cr. Kyaw Mg Mg
PannPwint – Celebrity manmar burma
THAILAND cr.Minthu Nya
25.12. protest thailand
နေ့လည် ၂ နာရီ ကျော်တဲ့အထိ လူစုမကွဲသေးပါ။
ပြည်သူများက ကမ္ဘာမကြေ နိုင်ငံတော်သီချင်း သံပြိုင်
သီဆိုနေကြပါတယ်။ myanmar burma
Date: 24th December, 2015
H.E Prime Minister,
Government of the Kingdom of Thailand
Ambassador Thailand Embassy in Yangon
The 88 Generation Peace and Open Society’s objection against death sentences of two Myanmar migrant workers
We learned that the Thai court sentenced two Myanmar migrant workers to death on 24th December 2015 after convicting them of murders of two British citizens, Mr. David Miller and Ms. Hannah Witheridge, on Koh Tao Island.
This verdict came out despite international lawyers and human rights groups publicly pointed out the Myanmar migrant workers were wrongly accused by Thai Police, there wasalack of key witnesses, and flaws in DNA tests and procedures of forensic pathologists during the police investigation occured.
This case proves that the Thai judiciary has weaknesses and there isasignificant ground for international criticism. We want our citizens to enjoy justice and the right to fair trial.
Hence, we, THE 88 GENERATION (Peace and Open Society) hereby object those death sentences of two Myanmar migrant workers. We urge you to pay an utmost attention to review this case and the verdict.
THE 88 GENERATION (Peace and Open Society)
“The Burmese government will continue to help through diplomatic channels without damaging Thailand’s sovereignty, its independent court ruling and bilateral relations between Burma and Thailand,” he said, adding that if needed the government would appeal to the Thai Privy Council forareduction in the sentences. Continue reading “#update #MYANMAR #PROTEST #THAILAND #DEATH #SENTENCE #JAPAN #TOKYO” →
#အာဏာရှင်ကို #ကာကွယ်တာမဟုတ်ပါ။ #STOP #BBC #BURMESE
On December 11, 2015 December 11, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMARLeaveacomment
အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး မူဝါဒအရ
BBC Burmese သတင်းဌာန၏
လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ် ကဏ္ဍတွင်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေကို အရေးယူသင့်သလား
ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍
NLD အနိုင်မရခင် လွန်ခဲ့သော နှစ်များတည်းက
ထိုသို့ဆွေးနွေးမှုကို လုံးဝ မပြုလုပ်ပဲ
ရဲမိုး (ဘစိုး) နှင့် အင်တာဗျူးပြီးမှ ဘာ့ကြောင့်ပြုလုပ်သလဲ
ဒေါ်တင်ထားဆွေအားမေးမြန်းလိုပါသည်။ cr. Yan Aung
BBC Burmese သတင်းဌာန၏ လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ် ကဏ္ဍတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေကို အရေးယူသင့်သလား ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်သူ များပြား
BBC Burmese သတင်းဌာန၏ လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ် ကဏ္ဍတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေကို အရေးယူသင့်သလား ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်သူ များပြားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေကို အရေးယူ သင့်သလား ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးလိုသူများအား BBC Burmese သတင်းဌာန၏ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်က ရေးသားဖိတ်ခေါ်ထားပြီး ယင်းအစီအစဉ်အား ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်ည ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွင် ဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်ကာ ပါဝင်ဆွေးနွေးလိုသူများ အနေဖြင့် BBC Burmese သတင်းဌာနသို့ ကြိုတင် ဆက်သွယ်ကြရန် ကြေညာထားမှုအပေါ် အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူများက အစီအစဉ်အား မပြုလုပ်ရန် ကန့်ကွက် ရေးသားထားကြသည်။
ယင်းအစီအစဉ်အား ကြေညာထားသည့် BBC Burmese သတင်းဌာန၏ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာတွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် ညနေအချိန်အထိ အွန်လိုင်း အသုံးပြုသူ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့် တစ်ထောင်ကျော်ခန့်က မှတ်ချက်များ ရေးသားထားကြပြီး အများစုမှာ အဆိုပါ အစီအစဉ်အား ပြုလုပ်ခြင်းမပြုရန် ကန့်ကွက်ထားကြသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် မှတ်ချက်ရေးသားသူ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါသည်။
#MYANMAR #Grandson of #Than #Shwe #met #Daw #Aung #San #Suu #Kyi.
On November 26, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMARLeaveacomment
Grandson of ex-dictator snr-gen Than Shwe has met Daw Aung San Suu Kyi. And Daw Aung San Suu Kyi has also confirmed about it.
Than Shwe’s grandson, Nay Shwe Thway Aung has written on his Facebook that ” I don’t want to beat around the bush anymore. I am so happy that Aunt, Aung San Suu Kyi has treated me warmly and friendly. I will do what I can for the good of the country. And I hope the people will happy about the news.”